Ungasebenzisa njani izixhobo ze-Amazon ukulinganisela ishishini lakho?
Ukuqhuba ngempumelelo ishishini lakho kwi-Amazon kwaye ube nexesha lokuphuhlisa ishishini lakho, kufuneka usebenzise izixhobo ezincedo kuma-Amazon FBA abathengisi. Ezi zixhobo ziya kwenza lula ubomi bakho, ugcine ixesha lakho ngokuphanda ixesha kunye nokuhlalutya.
Ukuba ungowona mgca we-ecommerce practice yakho ye-Amazon, ndincoma ukunamathela kunye neziseko zokugcina iindleko zakho ziphantsi - barbados passport renewal application. Emva kwexeshana, xa ishishini lakho liza kuba yinzuzo, ungaqala ukongeza ezitsha izixhobo ukwandisa umveliso wakho wezoqoqosho.
Ukuqala ishishini lakho kwi-Amazon akufuneki nayiphi na imali-mali. Nangona kunjalo, kufuneka ucinge ngempumelelo yakho yexesha elizayo. Kufuneka uqonde ukuba ukuqalisa ishishini kwi-Amazon kulula kakhulu kunokuyihlakulela. Ngexesha elithile, kuya kufuneka uhlaziye umlinganiselo webhishini lakho kwinqanaba elilandelayo. Ngaphandle koko, uya kulahlekelwa ngabathengi bethu nabanenzuzo.
Yingakho kweli nqaku siza kuxubusha ngezona zixhobo zokusebenza ze-Amazon ezingasetyenziswayo ekuphuhliseni ishishini lakho le-FBA.
Ingosi yamahhala yamaxabiso e-Amazon enokunceda apho I-JS yashiya kwaye ilandelela iinkcukacha zembali. Ihlola iimveliso ezininzi ze-Amazon kwaye zikwaziso xa amaxabiso ehla. Idatha enikezelwe yiThuluzi leCamel iya kukunceda uhlale ukhuphiswano kwi-niche yakho yemarike kwaye ube kwi-TOP yale mdlalo we-e-commerce. Ngaphezu koko, kunceda ukucacisa ukufaneleka kwedatha yokuthengisa. Ungakwazi ukulandelela ukuba ngaba iimveliso ziqala ukuvelisa kunye nokuthengiswa kweentengiso okanye ukwenza njalo. Ukusebenzisa ithuluzi leCamel, unokwazi ukujonga ukuhamba kwithuba. Ngelishwa, esi sixhobo asinayo nayiphi enye imisebenzi.
I-Lab yokufumana isixhobo esisebenzela ukuphucula uluhlu lwemveliso kwi-Amazon. Ukusebenzisa esi sixhobo, unokuphanda iimveliso, uluhlu uze uziphathe. Ngaphezu koko, unako ukulandelela zonke iindleko zakho kwaye ubale inzuzo enenetha. Inika ithuba lokunyathelisa amalebula ngabanye ngexesha lokungeza into ethile kwi-inventory. Ufumana inzuzo enamandla xa ufumanisa uluhlu lwenzuzo yakho kwishishini lakho usebenzisa idivayisi yeselula.
Enye inzuzo yale sixhobo kukuba unokulandelela inzuzo yakho yezoshishino kwi-SKU nganye ukuba unesihlabathi kwi-Amazon.
uLebhu yokuBonelela inikezela iintsuku ezingama-30 zolu vavanyo. Emva koko, kuya kufuneka uhlawule i-$ 49 ngenyanga.
Ukukhulisa amafutha akho eeshishini, kufuneka ukwazi yokuthengisa. I-software ye-AMZ Tracker iya kunika yonke le datha, ikukuncede ukuba wenze isigqibo malunga nento onokuyenza ngayo ngebhizinisi lakho. Ngaphezu koko, usebenzisa le sixhobo, unokulandelela iimveliso zakho zokhuphiswano ukuze ubone xa benza utshintsho olusebenzayo. I-AMZ Tracker ikukunceda ukuba uchonge oko kuzisa izinga lokuguqulwa kwakho kwaye lilungise ngexesha. Ukongeza kuyo, unokubeka iliso ukuhlaziywa okungahambiyo kunye nokuvelisa iimveliso ngokulula kwiqela labo lokuhlaziya. Qaphela ukuba esi sixhobo sineendleko zenyanga kwaye asiniki naziphi iinkonzo zamahhala.